Home » သတင်း » IBC2016 မှာ Digigram
IBC2016 မှာ Digigram
Digigram ကုန်ပစ္စည်းကို Preview
စက်တင်ဘာ 8-12, အမ်စတာဒမ်
IBC2016 မှာ Digigram မိမိတို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအား, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အစီအစဉ်ကိုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်လာဖို့ကမ္ဘာတဝှမ်းထုတ်လွှင့်ကူညီ IP ကိုဖြေရှင်းချက်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ Digigram ကျွမ်းကျင်သူများ, IP ကိုစတူဒီယိုရွှေ့ပြောင်းနှင့်စမတ် AoIP streaming များအတွက် IP middleware လိုင်စင်များအတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ IP ကိုအသံ codec, codec စင်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မိုဃ်းတိမ်၌စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအဖြစ်အသံ-over-IP ကို ​​(AoIP) သံကိုကတ်များအတွက်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုကိုပြသပါလိမ့်မယ် နှင့် encoding ကစနစ်များကို။ Digigram လည်း၎င်း၏အသစ်အ AQORD 4K တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် က Ultra HD (UHD) HEVC အဆုံးမှအဆုံးသို့ဗီဒီယို Over-IP ကိုဖြေရှင်းနည်း။
ဂေဟစနစ်အပေါင်းအဖေါ်များမှ Now ကိုဖွင့်ပါ IQOYA IP ကိုပေး Audio-လွှနည်းပညာ
Digigram မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တိုက်ရိုက် streaming များ, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် encoding ကစနစ်များဖန်တီးရေးတို့အတွက်မိတ်ဖက်ဂေဟစနစ်မှ middleware အဖြစ်သုံးစွဲနိုင်သည်၎င်း၏ကျော်ကြား IQOYA အသံ-over-IP ကို ​​(AoIP) နည်းပညာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ထူးခြားသော IQOYA * VIP အင်ဂျင်မိတ်ဆက်ခုနှစ်, Digigram OEM မိတ်ဖက်သူတို့ရဲ့ပြုသောပူဇော်သက္ကာကိုသက်သေပြ high-performance ကို AoIP streaming များနည်းပညာပေါ်တွင်တည်ဆောက်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်မှုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကို-added applications များ, ပေးအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
IQOYA * VIP အင်ဂျင်
IQOYA * VIP ထုတ်လွှင့် OEM မိတ်ဖက်များနှင့် System Integration တွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့အဖြေတစ်ခုအတွက် Digigram ရဲ့ချီးကျူး IQOYA IP ကို ​​audio streaming ၏နှင့် encoding ကအင်ဂျင်ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့် FluidIP "နည်းပညာပေါ်တွင်တည်ဆောက်, နှင့်အဓိက Real-time အသံ-over-IP ကို ​​protocols များပေါင်းစပ်။ သန့်စင်ပြီးနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တယ်လီကွန်းလုပ်ငန်းများဦးဆောင်များအတွက်ငါးနှစ်နှင့် 3,000 တပ်ဆင်ထက်ပိုကျော် optimized သည်လွယ်ကူသော-to-ပေါင်းစပ် IQOYA * Digigram ထံမှ VIP အင်ဂျင်ဇာတိက high-performance ကို AES67, MPEG-TS နှင့် ACIP အသံ-over-IP ကို ​​streaming များကို formats features ထိပ်တန်း-of-the-range ကို MPEG, AAC, opus နှင့် apt-X ကို encoding က / ဒီကုဒ်ဒါအဖြစ်တိကျ PTP နာရီထပ်တူ။ အဆိုပါ streaming များအင်ဂျင် high-level ကို module အတွက်ထုပ်ပိုးပြီး Web-န်ဆောင်မှု API ကိုများနှင့်အသွင်တဆင့်ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့်, IQOYA * VIP ရိုးရှင်းတဲ့ AES67 AoIP ကို ​​virtual sound card ကိုကနေအထိတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်အသုံးပြုမှုကိုအမှုပေါင်းအမျိုးမျိုးဖွင့်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ရန်လွယ်ကူသည် ဦးခေါင်း-အဆုံးဖြန့်ဖြူးဘို့ရှုပ်ထွေး multiformat transcoding လယ်ယာ။
အဆိုပါ IBC2016 ပြရန်စဉ်အတွင်း Digigram အသုံးပြုသူများသည် '' ပြင်ပမှာဝေးလံသောအသံလွှင့်လုပ်ငန်းများမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရိုးရှင်းဖို့ဒီဇိုင်းနှစ်ခုထုတ်ကုန်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကြံ့ခိုင် IQOYA * မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး codec စင်းကို-စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပလီကေးရှင်းနှင့်၎င်း၏သတင်းထောက် Pack ကို, သွားလာရင်းဂျာနယ်လစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းအနေနဲ့ပေါင်းစပ် mobility ဖြေရှင်းချက် feature ပါလိမ့်မယ်။
IQOYA * မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး Web App
မဆိုချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ web browser ကိုမှတဆင့်ဘယ်နေရာကနေမဆိုသုံးစွဲနိုင်, IQOYA * တိမ်တစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံမာစတာထိန်းချုပ်မှုအခန်းထဲမှာလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ရန်လွယ်ကူစေသည်တစ်ခုပြည့်စုံခြင်းနှင့်လုံခြုံ SIP ထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထား (MCR) လျှောက်လွှာ, ပေးပါသည် configure နှင့်တစ်စင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ အိုင်ပီအသံ codec ။ ကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးအားလုံးမှတ်ပုံတင် ACIP အသံ-over-IP ကိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ၏ထိရောက်သော Real-time စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုထောက်ပံ့, ဒီဗဟို, Cloud-enabled tool ကိုထိန်းချုပ်ခန်းအော်ပရေတာကိုလက်မခံခြင်းနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစပျိုးလက်ရှိ codec status ကိုစောင့်ကြည့်လျက်, အပေါ်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နဲ့ configure လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု ပျံသန်း။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗားရှင်း (န်ဆောင်မှုတစ်ခု virtualized ပလက်ဖောင်း) မှပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိုင်တီစနစ်များသို့တပြင်လုံးကိုလျှောက်လွှာပေါင်းစပ်ဖို့ဆန္ဒရှိထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အင်ဂျင်နီယာနေစဉ်အသစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို-as-a-service ကိုဗားရှင်းအသေးစားနှင့်အလတ်စားရေဒီယိုစစ်ဆင်ရေးမှမိုဃ်းတိမ်ကိုအကျိုးခံစားခွင့်ဆောင်တတ်၏ Digigram Professional ကန်ဆောင်မှုများ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Digigram/Digigram-IQOYA-CLOUD-LOGO.png
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: IQOYA * မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး
သတင်းထောက် Pack ကို: တစ်စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူဘယ်နေရာကနေမဆိုအသံလွှင့်အရည်အသွေးအတွက်တိုက်ရိုက် Go
Digigram ရဲ့ IQOYA * မိုဘိုင်း app, Q-Mic preamp နှင့် IQOYA * ခေါ်ဆို codec ထုတ်ကုန်အတူတူနေတဲ့သတင်းကဏ္ဍသို့မဟုတ်တစ်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုမှ Full-duplex တိုက်ရိုက်အသံပံ့ပိုးမှုများကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲဖို့လယ်ပြင်သတင်းထောက်တွေကို enable ။ ဒီလက်တွေ့ကျတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တတ်နိုင် Ultra-mobility ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ, စာနယ်ဇင်းသမားများမရှိတော့ပွဲချင်းပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးအသံအစီရင်ခံစာများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖို့အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့, စျေးကြီးပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်သည်။ လိုအပ်ကြောင်းအားလုံးကြိုးမဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး 2016 သာမြှင့်တင်ရေးအတွက်, Digigram တဦးတည်း IQOYA လျှောက်လွှာ, IQOYA * MOBILE ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့် IP ကိုကျော်အလှူငွေဆောင်ရွက်မှုတွေ, တ Q-Mic preamp ဖြစ်ပါတယ်ယင်း၏ IQOYA မဆို၏ဝယ်ယူနှင့်အတူအခမဲ့ * ခေါ်ဆိုသို့မဟုတ် IQOYA * ခေါ်ဆို / LE IP ကိုအသံ codec ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Digigram/Digigram-Q-Mic-and-IQOYA-MOBILE.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: IQOYA * မိုဘိုင်းနှင့် Q-Mic
SSL ကို, STL, ဒီဗွီဘီ, နဲ့ Web ရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြန့်ဖြူးဘို့ audio-ကျော်-IP ကို ​​codec
ကုမ္ပဏီ၏ IBC2016 မှာမတ်တပ်ရပ်, Digigram IP ကိုစတူဒီယိုမှအပြည့်အဝဆက်ကပ်အပ်နှံထားကိုပထမဦးဆုံးဖြန့်ဝေဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်မည်စတူဒီယို-to-စတူဒီယိုလင့်များ (SSL) ကို, စတူဒီယို-to-transmitter ကိုလင့်များ (STL), ဒီဗွီဘီရေဒီယိုနှင့်ဝက်ဘ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဖြန့်ဖြူးဘို့မိမိတို့လိုအပ်ချက်များကို ။
IQOYA * X / LINK
အဆိုပါ IQOYA * X / LINK, STL, SSL ကိုများအတွက်အားကောင်းတဲ့အနိမ့်-အောင်းနေချိန်ဖြန့်ဖြူးလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါ, FluidIP encoding ကနှင့် streaming များအင်ဂျင်စွမ်းအားဖြင့်, Digigram ရဲ့ဆုရ IQOYA ARM အခြေခံပလက်ဖောင်းတစ်ခုတိုးမြှင့်ဗားရှင်းအပေါ်မျိုးစုံ IP ကိုအသံ codec နှင့် transcoding ဆာဗာများကိုပေါင်းစပ်ပြီး ဒီဗွီဘီနှင့်အနိမ့်အောင်းနေချိန်, AES67-synchronous AoIP ရင်းမြစ်များမှက်ဘ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ။ AES10 သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များနှင့်အတူ bidirectional စတီရီယိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ 10 အထိထောက်ပံ့နေစဉ် IQOYA * X / LINK တစ်ပန်ကာမပါနဲ့ Ultra-Low-ပါဝါ 67W ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။ ကျစ်လျစ်, High-density ကိုစနစ် Digigram ရဲ့ IQOYA * LINK စတီရီယို codec အပေါငျးတို့သအကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်, IQOYA * X / LINK အကြောင်းအရာပေးပို့၏သမာဓိသေချာစဉ်အသုံးပြုသူများကိုပါဝါအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
တိုက်ရိုက်အဆုံး-to-end 4K / UHD ပံ့ပိုးပေးခြင်း
Digigram ဟာကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်နှင့် OB-ဗန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လိုအပ် Ultra-အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုနှင့်အတူအန်ကုဒ်နှင့်ဒီကုဒ်ဒါနှစ်ဦးစလုံးပါဝငျသောပြည့်စုံ 4K / UHD ဟာ့ဒ်ဝဲ-based အလှူငွေ link ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့အလွန်ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီများမှကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။
AQORD 4K က Ultra HD (UHD) HEVC ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ / ဒီကုဒ်ဒါ
ပို. ပို. ပရီမီယံအရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြု high-resolution ကို (265Kp4, 60 မှတက် 4.2.2-bit မှာ, 10 Mbps ထိ) ဗီဒီယိုကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောပံ့ပိုးမှုများ enable လုပ်ဖို့ HEVC / H.120 ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်း, AQORD 4K က Ultra HD (UHD) HEVC အန်ကုဒ် / ဒီကုဒ်ဒါထုတ်လွှင့်ကာအဆုံးမှအဆုံးသို့တိုက်ရိုက် 4K-UHD သို့မဟုတ် multiple- တည်ဆောက်ခွင့်ပြုHD ဟာ့ဒ်ဝဲ-based, OB-ဗန်-သဟဇာတဗီဒီယို Over-IP ကိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ၏တစ်ခုတည်း pair တစုံနှင့်အတူအလှူငွေ link ကို။ အမွေ H.264 စနစ်များအဖြစ်ထက်ဝက်အဖြစ် bandwidth များများစားစားလိုအပ်, ဒီ High-end ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအနိမ့်ပါဝါ (<100W), ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာဘစ်နှုန်းမှာယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအရည်အသွေးနှင့် Ultra-အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်အတူပရီမီယံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာ stream ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် OB ဗင်များအတွက် (တိုတောင်း 1U ကရိယာ) စံပြ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Digigram/Digigram_AQORD_HEVC4K_front_logo.png
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: AQORD 4K က Ultra HD HEVC ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ
ထက်ပိုမို 30 နှစ်ပေါင်းအဘို့, Digigram အဆိုပါအလှူငွေ, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အကြောင်းအရာလုံခြုံဖြန့်ဖြူးဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံမစ်ရှင်-ဝေဖန်ဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနေရသည်သိရသည်။ Digigram သံကိုကတ်များ, IP ကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ software ကိုဖြေရှင်းချက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထုတ်လွှင့်, AV စနစ်နှင့်စက်မှု applications များထောင်ပေါင်းများစွာ၏များတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူ, Digigram ဖြေရှင်းချက်နိမ့်တဲ့ operating ကုန်ကျစရိတ်နှင့်သုံးစွဲသူများ '' စစ်ဆင်ရေးတန်ဖိုးဖြည့်စွက်, ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်။
Digigram (ကိုတူး) လူသိရှင်ကြား NYSE Euronext ပဲရစ်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ စျေးကွက်-ဦးဆောင် Digigram audio- နှင့်ဗီဒီယို-over-IP ကိုဖြေရှင်းချက်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.digigram.com.
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=Check ယခုနှစ်ရဲ့ IBC မှာ @digigram IP ကိုဖြေရှင်းချက်ထုတ် - goo.gl/FOpL8c % 23IBCShow
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ မိုဃ်းတိမ်ကို Digigram IBC2016 IQOYA * VIP အင်ဂျင် isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2016-07-18
ယခင်: ပညာရေးဆိုင်ရာ broadcast, Montgomery ကောလိပ်ရုပ်မြင်သံကြား (MCTV), Myers '' ProTrack နှင့်အတူ Multi-Channel ကိုစစ်ဆင်ရေးများအတွက် Readies
နောက်တစ်ခု: ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်မိုဘိုင်းတီဗီ Group ၏နယူး 4K Truck ကားများအတွက် Fiber Booth Kit ထောက်ပံ့